Soomaaliya, 17 May 2018
Khamiis 17 May 2018
Wareysi: Ramadaanka iyo muslimiinta Mareykanka
Waxa Arbacada maanta xeebaha galbeed ee Yemen iyo woqooyiga Somalia laga filayaa duufaan xoog badan oo dhalin karta roobab xoog badan oo keeni kara dhimashada dadka, xoolaha, burburka dalagyada, dhismayaasha iyo kaabayaasha dhaqaalaha.
Qodobo laga soo saaray shirkii Baydhaba
Hoggaamiyayaasha mamaul goboleedyada Soomaaliya oo muddo saddex malamood ah ku shirayey magaalada Baydhaba ayaa sheegay inay ka walaacsna yihiin xiririka sii xumaanaya ee dawlada federaalka iyo dawladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga.
Beelo ku dagaalamay Galgaduud oo la heshiisiiyey
Nin kasoo goostay Al-Shabaab oo dilay askari
Nin horey uga soo goostay ururka Al-Shabab horraantii sannadkan, iskuna soo dhiibay ciidanka dawladda, ayaa la sheegay inuu xalay askari ka mid ah ciidamada dawladda ku dilay magaalada Beled Xaawo.
Somaliland oo soo saartay amarro la xiriira Ramadaanka
Wasaaradda Diinta iyo Aw-Qaafta Somaliland ayaa amaro ay soo saartay ku fartay imaamyada masaajiddada in la gaabiyo codadka cod-baahiyayaasha salaadaha habeenkii ee sunnaha ah inta lagu gudo jiro bisha Ramadaan.
Malaayiin muslimiin ah oo oogay maalinta 1-aad ee Ramadan
Malaayiin Muslimiin ah ayay maanta u tahay maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadan. Dalalka Turkiga, Albania, Bosnia , Kosovo, Macedonia iyo kuwo kale ayaa Arbacadi maanta ah laga soomanyahay.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 421-aad
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu ka walaac sanyahay dagaalka saaka kasoo cusboonday deegaanka Tuka-raq.